Dihy an-tanàn-dehibe : mihamaro ny mpandray anjara amin’ny “Battle for peace” | NewsMada
Dihy an-tanàn-dehibe : mihamaro ny mpandray anjara amin’ny “Battle for peace”
Par Taratra sur 09/02/2018
Hotanterahina eto an-dRenivohitra, ny 24 febroary hatramin’ny 4 marsa izao, ny andiany fahadimy amin’ny “Festival Ambony Ambany, Battle for peace”.
Hetsika miompana tanteraka amin’ny dihy an-tanàn-dehibe sy ny “afro-dance” ary karakarain’ny fikambanana Dance Team. Anisan’ny mibahan-toerana mandritra ity “festival” ity ny fifaninanana na ny “battle”. Araka ny nambaran’ny mpikarakara, mbola mitohy ny fisoratana anarana amin’izany. Hatreto, tsapa ho mihamaro hatrany ireo liana amin’ny hetsika, na amin’ny sokajy mandeha irery io na anaty tarika.
Ao amin’ity sokajy farany ity, ohatra, niakatra hatrany ny isan’ny mpandray anjara avy any amin’ny faritra, toy ny avy any Toamasina, izay hiisa telo ireo tarika handray anjara raha tokana ihany izany tamin’ny andiany teo aloha. Ho tonga ihany koa ny avy any Toliara, ahitana tarika iray, raha mbola tsy nisy izany hatramin’izay.
Ho avy koa ny vahiny…
Ho an’ny mpifaninana, hatao ny 3 marsa ny “battle” amin’ny sokajy olon-tokana manao “breakdance”, “krump” ary “dancehall”, ao amin’ny “gymnase” eny Ankatso. Hatao, etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ny 4 marsa kosa, ny famaranana “show” ifaninanan’ny sekoly mampianatra dihy, sekoly tsotra, eo amin’ny samy matihanina. Toy izany koa ny famaranana amin’ny “breakdance” eo amin’ny tarika, ny “kids battle” ary ny “creative battle”.
Ankoatra ny fifaninanana, handray vahiny avy any ivelany ny Battle for peace ka miisa efatra izy ireo, izay haneho ny talentany sy hizara ny traikefany, araka ny nambaran’ny mpikarakara hatrany.